#GIS - ArcGIS 10 Course - laga bilaabo xoqidda - Geofumadas
#GIS - Koorsada ArcGIS 10 - oo ah xoq
Waxaad jeceshahay GIS, markaa halkan waxaad ka baran kartaa ArcGIS 10 xoqista waxaadna heli kartaa shahaado.
Koorsadani waa 100% oo uu diyaariyey abuuraha «El blog de franz», haddii aad booqatay boggaas waxaad ogaan doontaa haddii aad wax baranayso, sameyso ka hor intaadan bilaabin.
Waxaa ku jira layliyada iyo buugga: Aasaaska GIS.
In kasta oo intiisa badani ay tahay wax ku ool, talaabo talaabo ah. Waxay kaloo isku daraysaa qayb fikradeed oo u oggolaaneysa ardayda inay ku saleeyaan aqoontooda GIS, maxaa yeelay looguma talagalin in ay baraan farsamada gacanta, laakiin waa isku dhaf.
ArcGIS 10 min eber ilaa heer dhexe.
Fahmaan fikradaha aasaasiga ah ee GIS.
Abuur oo maaree qaababka qaababka.
Adeegso aaladaha geoprocessing.
Xisaabinta joomatariyiinta (bedka, wareega, dhererka, iwm.).
Maareynta iyo maaraynta miisaska.
Samee xirfadaha falanqaynta xayawaanka.
Ogow aaladda ugu weyn ee falanqeeyaha Spatial.
Codso noocyo kala duwan oo calaamadaha ah.
Ogow is dhexgalka iyo codsigiisa.
Naqshadeynta khariidadaha diyaarka u ah daabacaadda.
Fikradaha aasaasiga ah ee sawir-gacmeedka iyo sawiro.
Buugga: Aasaaska GIS (waxaa ku jiray).
Layli: Tilmaamaha GIS (waxaa kujira).
ArcGIS 10 (Ingiriis) waxaa lagu rakibay kumbuyuutarkaaga (Waxaa loo baahan yahay kahor intaanad is qorin).
GIS adduunka jecel.
Xirfadlayaasha kaynta, deegaanka, bulshada, juqraafi, juqraafi, architecture, qorsheynta magaalada, dalxiiska, beeraha, bayoolaji iyo dhammaan kuwa ku lug leh cilmiga dhulka.
Dadka doonaya inay ogaadaan kartida ArcGIS.
Isticmaalayaasha barta 'Franz's blog'.
Post Previous«Previous #GIS - Koorsada Geolocation for Android - adoo adeegsanaya html5 iyo Khariidadaha Google
Post Next #BIM - Koorsada Injineeriyada Dhismaha iyadoo la adeegsanayo RevitNext »